Sunday January 19, 2020 - 10:55:09 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal jihaadi ah oo jamaaco islaami ah dhowaan ka fulisay wadanka Nejeeriya ee dhaca galbeedka qaaradda afrika, wararka ka imaanaya Nigeria waxay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof oo ay kamid yihiin mas'uuliyi
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal jihaadi ah oo jamaaco islaami ah dhowaan ka fulisay wadanka Nejeeriya ee dhaca galbeedka qaaradda afrika, wararka ka imaanaya Nigeria waxay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof oo ay kamid yihiin mas'uuliyiin dowladeed ay ku dhinteen weerarka oo ka dhacay gobolka kaaduuna.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska booliska gobolka Kaduna ayaa lagu sheegay in xoogag hubeysan ay arbacadii lasoo dhaafay weerar jidgal ah u dhigeen kolonyo uu lasocday guddoomiyaha gobolka.
Dowladda Nigeria waxay qirtay in weerarka lagu dilay ugu yaraan 6 qof oo ay kamid yihiin kaaliyaashii guddoomiyaha kaaduuna iyo askar kale, guddoomiyaha laweeray ayaa lagu magacaaba Alxaaji Cumar.
Mas'uuliyadda weerarkan waxaa sheegatay jamaacada jihaadiga ah ee Ansaaru muslimiin Fii Bilaadi Suudaan, bayaan rasmi ah oo jamaacadan kasoo baxay ayay ku sheegtay in ciidamadedu ay mas'uul ka ahaayeen weerarka ayna dhimasho iyo dhaawac noqdeen ugu yaraan 22 katirsan ciidanka dowladda Nigeria.
"Mujaahidiinta jamaacada Ansaarul muslimiinta bilaadu suudaan ayaa beegsaday kolonyo katirsan ciidanka nayjeeriya waxaana weerarka dhimasho iyo dhaawac ku noqday 22 askari" ayaa lagu yiri bayaanka.
Jamaacadan jihaadiga ah ayaa sanadadii dambe caan ku aheyd fulinta weerarada qafaalka ah ee ka dhanka ah ajaanibta cadaanka ee Nigeria ku sugan sidoo kale dhowr jeer ayay fulisay weeraro aan sidaas uballaarnayn oo lala beegsaday ciidamada dowladda Nigeria.
Dadka dabagalka ku sameeya jamaacaadka jihaadiga ah waxay sheegaan in ansaarul muslimiinta najeriya ka dagaallanta ay hoos tagto urur weynaha alqaacidda ee maqribul islaami.